Dowladda Federaalka Oo Qoraalo is khilaafsan Ka Soo Saartay Xiisada Galmudug | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Oo Qoraalo is khilaafsan Ka Soo Saartay Xiisada Galmudug
MUQDISHO;-War saxaafadeed lagu soo daabacay wakaaladda wararka ee SONNA oo la sheegay inuu ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu taageeray go’aankii barlamaanka Galmudug uu xilka uga qaaday Madaxweyne Xaaf. Qoraale kale oo ka soo baxay isla wasaaradda arrimaha gudaha oo uu ku saxiixnaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi faarax Juxa. Waxaana qoraalku waxba kama jiraan ku tilmaamey kii ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee u hadashey isla wasaaradiisa isaga oo aan waxba ka ogeyn, qoraalka ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa ah mid xaaladda lagu dejinaayo, waxaana uu yahay mid lagu taageerayo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, laguna dalbanayo in xaaladda la dejiyo.
Qoraalka hore ayaa ku baaqay in la ixtiraamo go’aankii uu Baarlamaanka GalMudug gaaray maalintii shalay oo taariikhdu tahay 26 September 2017, loona hoggaansamo sareynta sharciga. Waxay kaloo cambaareeyeen in qulqatooyinkii u dambeeyay ka dhacay magaaladda Cadaado
‘Dowladda Federaalku waxay waxba kama jiraan ku tilmaantey go’aankii aan dastuurka waafaqsaneyn ee Xildhibaaano tiro yar gudaha magaalada Cadaaado ku gaareen’
Lama garanayo sababta Wasaaradda Warfaafintu ay ugu hadashey Wasaarad kale iyada oo aan soo xiganeyn?. Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Warfaafintu ayaa la sheegay inuu jaahwareer galiyay xaaladda cakiran ee ka taagan Galmudug iyada oo qoraalku yahay been abuur sida lagu sheegay warka ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Qoraalka ka soo baxay Warfaafinta waxaa lagu daabacay barta Twitter-ka ee Warsaadda, kan facebook , waxayna wararka sheegayaan in qoraalka uu gaarsiiyey wasaaradda warfaafinta, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Cabdullaahi Faarax Wehliye, qoraalkan ayaa jahwareer kale galin kara, sidii dhacay dhacdadii Bariire
Halkaan hoose ka Akhri digreetada Lagu Daabacay SONNA ee la sheegay in Wasaaradda Arrimaha gudaha ay soo saartay.
Qoraalkii Rasmiga ahaa ee Ka soo Baxay Wasaaradda arrimaha Gudaha